Ny vy tsara indrindra ho an'ny famolavolana lasitra plastika
Ireo injeniera dia manana zavatra be dia be hodinihina rehefa miasa amina lasitra tsindrona plastika ho an'ny tetikasa iray. Na dia marobe aza ny resins thermoforming azo isafidianana, ny fanapahan-kevitra ihany koa dia tsy maintsy raisina momba ny vy tsara ampiasaina amin'ny fitaovana famolavolana tsindrona. Ny karazana s ...
Fitaovana vy mahazatra D2
Ny vy D2 dia vy vita amin'ny rivotra, avo-karbaona, vy avo-chromium. Izy io dia manana fanoherana avo lenta sy fanoherana fanoherana. Aorian'ny fitsaboana hafanana, ny henjana dia mety hahatratra ny 55-62HRC, ary azo zahana amin'ny fanjakana annealed. Ny vy D2 dia saika n ...
Ahoana ny fisafidianana ny vy vy ho an'ny fanamboarana bobongolo
Fepetra takiana ankapobeny amin'ny fametahana fitaovana Ny hamafin'ny fihenan'ny fitafiana ary koa ny hamafiny dia roa amin'ireo mason-tsivana lehibe indrindra rehefa misafidy ireo vy vy mety aminy. Satria mifanohitra matetika ireo toetra ireo, rehefa matetika ny misafidy ny marimaritra iraisana. Io izahay...
Haja haingam-pandeha: azo ampiharina sy malaza kokoa
Araka ny loharanom-baovao, ny tsena manerantany ho an'ny fitaovana fanapahana vy haingam-pandeha haingam-pandeha (HSS) dia andrasana hitombo hatrany amin'ny $ 10 miliara amin'ny taona 2020. Jackie Wang-General mpitantana ny Shanghai Histar Metal, mijery ny antony mahatonga ny HSS hijanona ho safidy malaza, ny tsy itovizany kompositions ava ...
FAMPIANARAN'NY ROSOLY ALOHA SY NY GRADES Inona no atao hoe Tool Steel?
Inona no atao hoe Steel Tool? Ny vy vy dia karazana vy vita amin'ny karbonina izay mifanentana tsara amin'ny famokarana fitaovana, toy ny fitaovan'ny tanana na ny milina maty. Ny hamafiny, ny fanoherana ny abrasion ary ny fahaizany mitazona endrika amin'ny maripana mitombo no tena mampiavaka ity fitaovana ity. Ny vy vy dia mahazatra ...
Ny fiakaran'ny vidim-piainana dia manohana ny vidin'ny rebar Eropeana maotina, ny fiakaran'ny vidim-bokatra dia nampiharin'ireo mpamokatra rebar any amin'ireo firenena eropeana Andrefana, tamin'ity volana ity. Ny fanjifan'ny indostrian'ny fananganana dia mijanona ho salama hatrany. Na izany aza, ny tsy fahampian'ny lehibe-v ...
Miverina ny vidin'ny vy eoropeanina satria mampatahotra ny mpividy eropeanina ny vokatra vita amin'ny vy dia nanomboka nanaiky tsikelikely ny fiakaran'ny vidin'ny fikosoham-bary, tamin'ny tapaky / faran'ny volana desambra 2019. Ny famaranana ny fizotran'ny destocking lava dia nanjary fanatsarana ny app ...
Mitohy ny fanarenana tsena vy, ao anatin'ny tolona manerantany Ny areti-mifindra coronavirus dia niteraka fahasimbana tamin'ny tsena vy sy toekarena manerantany, nandritra ny enim-bolana voalohany tamin'ny taona 2020. Ny toekarena sinoa no voalohany nijaly tamin'ny vokatry ny Covid-19-associateat ...
Ny vy tsara indrindra amin'ny bobongolo plastika ...
Ahoana ny fisafidianana ny vy vy ho an'ny bobongolo-ma ...
FAMPIANARAN'NY ROSY ALOHA SY NY LOHATENY Inona no ...
Telefaona: 0086 21 61052109
Adiresy: RM 907, NO.377, LALANA JINGAO, PUDONG, SHANGHAI, CHINA
Fitaovana fisaka vy vy, A8 / 1.2361 Antsy Chipper, Bara fisaka avo haingam-pandeha, Takela-by vy, Bar fisaka tsy misy vy, Inôksa,